२२ प्रतिशत बालबालिका अझै खोपबाट बञ्चित - Health Today Nepal
२२ प्रतिशत बालबालिका अझै खोपबाट बञ्चित
May 8th, 2019 समाचार0comments
काठमाडौ,२५ बैशाखः सरकारले खोप कार्यक्रको लागि अर्बौ खर्च गरेपनि अझै २२ प्रतिशत बालबालिका खोपबाट बञ्चित भएको पाइएको छ । यस वर्ष मात्रै सरकारले खोप कार्यक्रम अन्र्तगत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । तर, अझै पनि हजारौं बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न प्रकृतिका रोगविरुद्ध अझै २२ प्रतिशत बालबालिकाले खोप पाएका छैनन् । सरकारले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको दावी गर्दै आएपनि विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
परिवार कल्याण महाशाखाबाट ११ प्रकृतिका खोप १६ हजार खोप केन्द्रबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जनचेतनाको अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका खेपबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । अर्कोतिर खोप कार्यक्रमबारे जानकारी नहुँदा इँटा भट्टामा काम गर्ने अभिभावकका बालबालिका खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
खोप कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकका ५६ हजार ७ सय बालबालिकाले यो वर्ष क्षेयरोगविरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् । त्यस्तै, ६९ हजार ३ सय बालबालिकाले भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुषटंकार रोगविरुद्धको खोप पेन्टा (डीपीटी, इन्फुलन्जा, हेपाटाइटीस बी) खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
खोप शाखाले ६९ हजार ३ सय बालबालिकाले पक्षघातविरुद्ध पोलियो र एफआईपीभी खोप लगाउन नपाएको जनाएको छ । यस्तै, ७५ हजार ६ सय बालबालिका निमोनियाविरुद्ध पीसीभी खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
७५ हजार ६ सय बालबालिका मस्तिष्क सुजन (इन्सेफलाइटिस) विरुद्ध जेई खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका खोप शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभिन्न प्रकारका खोप लगाउन योग्य एक वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ६ लाख ३० हजार रहेको छ ।
Previous article राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य रणनीति सार्वजनिक
Next article बर्डफ्लु भेटिएपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर कुखुरा नष्ट
Health Today Nepal
दि युनियनको अबको अभियान, ‘ई–सिगरेट्स र हिटेड टोबाको प्रडक्ट ’ बन्देज
स्वास्थ्य सचिव कोइरालाको ३ महिना नबित्दै सरुवा, नयाँ स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी अर्याललाई
बैतडीमा पहिलो पटक एकजनामा कोरोना पुष्टि भएपछि उच्च सतर्कता, थुनुवा कक्षमै कोरोना देखिएपछि प्रहरी कार्यालय सिल
May 29th 1:32 AM
May 28th 1:35 PM
May 22nd 3:16 PM
May 22nd 2:04 PM
कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी भएन : लेखक
May 19th 3:23 PM
नेपालमा पहिलो पटक चिकित्सकलाई पनि कोरोना संक्रमण
May 19th 12:59 PM
डब्लूएचओलाई ट्रम्पको ३० दिने अल्टिमेटम, नसुध्रे सधैँका लागि सहयोग रोक्ने चेतावनी
May 18th 7:25 AM
‘कोबिड– १९’ प्रतिरोधी आहारपूरक फुडसप्लिमेन्ट
May 18th 5:42 AM
कोरोना संक्रमित सुत्केरीको मृत्युले उब्जाएको प्रश्न
हेल्थ टुडे मिडिया प्रा.लि.
सुचना बिभाग दर्ता नम्बर : ३८५/०७३-७४
हेल्थ टुडे मिडिया प्रा.लि
01-4212972, 9841449315, 9848851122
© Health Today Nepal 2020. All rights reserved.
Designed & Developed By : Nepsol Web